Wednesday October 03, 2018 - 12:33:18 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Donald Trump ayaa khudbad uu jeediyay ku sheegay in dowladaha dabadhilifka Carabta ay heystaan lacago Balaayiin dollar ah balse aysan dowlad sii ahaan karin Mareykan la'aantiis.
"Boqorka Sacuudiga waxaan u sheegay in aysan dowlad sii ahaan karin muddo laba isbuuc gudahood ah haddii uusan Mareykanku ilaalineyn" ayuu yiri Trump.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa si aan qarsasho laheyn u xaqiijiyay in lacago malaayiin dollar ah ay ka qaataan dowladaha hodonka ku ah naftada ee Mandiqadda Khaliijka taasna ay uga bedeshaan ka ilaalinta khataraha ammaanka ah mandiqadda Bariga dhexe sida uu hadalka u dhigay.
" anigu waan jecelahay sacuudi Carabiya oo saaka waxaan wadahadal dheer laqaatay boqor salmaan oo waxaan ku iri boqoryahaw waxaad haysataa malaayiin tariliyoon oo dollar oo aanan annagu heysan, waxaana dhici karta in aadan awoodin in aad ilaashato diyaaradahaaga sababtoo ah sacuudigu wuxuu lakulmayaa weerar laakin annagu waxaan heysannaa ammaan buuxa" ayuu hadalkiisa sii raaciyay Trump.
isagoo boqolaal qof kula hadlayay taageerayaashiisa gobolka Virginia ayaa ku dheeraaday ka hadalka dhaqaalaha ay dowladdiisu ka qaadato dowladaha Khaliijka balse wuxuu si gaar ah ucarabaabay Sacuudiga.
Wuxuu sheegay in ciidamada Americanka ah ee ku sugan Bariga dhexe muhiimadoodu tahay ilaalinta dowladaha gacanka carabta kadibna ay ka qaataan lacago Boqolaal Bilyan oo dollar ah.
illaa iyo hadda wax jawaab celin ah kamasoo bixin dowladda Sacuudiga oo ku aaddan hadalladan ihaanada ah ee kaga yimid Donald Trump mana loo malaynayo in ay ka jawaabayaan sababtoo ah waa shaqaale reergalbeed sida dad badan oo Carbeed aaminsanyihiin.